China Emergency Bottom Valve စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Jiasheng
လူမီနီယမ်အလွိုင်း:80/100/150 (3 "/ 4" /6")
အစွန်းခံသံမဏိ:80/100 (3 "/ 4")
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း 1: အရေးပေါ်ဖြတ်တောက်မှုအဆို့ရှင်, အကြံပေးအဖွဲ့ထရပ်ကား၏အောက်ခြေတွင် install လုပ်။ , အကယ်၍ ရေနံတင်သင်္ဘောသည်ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုကိုရရှိပါကအရေးပေါ်ဖြတ်တောက်သောအဆို့ရှင်သည်အလိုအလျောက်ကျိုးပဲ့ပြီး၊ ရေနံတင်သင်္ဘောကိုယ်ထည်နှင့်အောက်ခြေပိုက်လိုင်းအားသီးခြားကိုယ်ထည်အဖြစ်ခွဲကာအရည်ယိုစိမ့်မှုမှကာကွယ်ရန်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွင်းလုံခြုံရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သောကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ဤထုတ်ကုန်သည် QC / T932-2012 စံနှုန်းနှင့်လည်းကိုက်ညီသည်။
လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ - အရေးပေါ်ဖြတ်တောက်ထားသောအဆို့ရှင်သည်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းပစ္စည်းများ၊ သွန်းလောင်းခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ခဲယဉ်းသောဓာတ်တိုးခြင်း၊ မြင့်မားသောတောက်ပသောခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ သံမဏိပစ္စည်းများကိုအတွင်း၌သုံးသောအပိုပစ္စည်းများသည်အသုံးပြုမှုကိုသက်တမ်းရှည်စေသည်။
Bottm Valve ဟုလည်းခေါ်သောလောင်စာဆီတင်စက်ခြေထောက်အဆို့ရှင်သည်ရေနံတင်သင်္ဘော၏အောက်ခြေတွင်တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ထိပ်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုရေနံတင်အတွင်း၌တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပိတ်ထားရသည်။ ရေနံတင်သင်္ဘောပျက်။ ပျက်စီးသွားသည့်အခါပြင်ပညှပ်အံဆွဲဒီဇိုင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းယိုဖိတ်မှုကိုကန့်သတ်သည်။ ၎င်းသည်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိသောအခြေအနေတွင်ဤ groove မှတဆင့်အလိုအလျောက်ဖြတ်သွားလိမ့်မည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ယင်းသည် overed rolled tanker များအားယိုစိမ့်မှုမှထိရောက်စွာကာကွယ်လိမ့်မည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်ရေ၊ ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီနှင့်ရေနံဆီနှင့်အခြားပေါ့ပါးသောလောင်စာများအတွက်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
1. ပစ္စည်း: လူမီနီယမ်
2. အရွယ်အစား:3", 4"
၃။ Type Flange ကိုစမ်းပါ
4. ပွင့်လင်း mode ကို: အဆုတ်
5. အပူချိန်: -20 ~ 70 ဒီဂရီ
အကျိုးကျေးဇူး & Feature ကို
1. ဖိအား - မျှမျှတတအမျိုးအစား
3. Hydrodynamic ခန္ဓာကိုယ်
4. ပြင်ပညှပ် Groove
အရေးပေါ်ဆေးရုံမှဆင်းရန်လိုအပ်သည့်အခါ, pneumatic ထိန်းချုပ်မှုအသုံးမကျဖြစ်ပါသည်, ကလက်လမ်းဖြင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါတယ်။
ရှေ့သို့ 5- ဝါယာကြိုး Overfill Optic Probe နှင့် Socket
နောက်တစ်ခု: အနားကွပ် Breather Valve
Tank Truck အရေးပေါ်အောက်ခြေအဆို့ရှင်